Kahor doorashada a mashiinka qalajinta bacriminta, waxaad u baahan tahay inaad sameyso falanqeyn hordhac ah oo ku saabsan baahiyahaaga qalajinta:
Waxyaabaha ay ka kooban tahay walxaha: Waa maxay astaamaha jirka marka ay qoyan yihiin ama qalalan yihiin? Waa maxay qaybinta kaladuwanaanshaha? Sumeysan, ololaya, wax daxaya ama xoqaaya?
Shuruudaha geeddi-socodka: Waa maxay qoyaanka qoyaanka? Qoyaanka miyaa si siman loogu qaybiyaa gudaha qaybaha? Maxay yihiin shuruudaha ugu horreeya uguna dambeeya ee qoyaanka ee walxaha? Waa maxay heerkulka ugu sarreeya ee qalajinta la oggol yahay iyo waqtiga qalajinta ee qaybaha? Heerkulka qalajinta miyuu u baahan yahay in la hagaajiyo inta lagu jiro habka qalajinta?
Shuruudaha kartida: Ma loo baahan yahay in qalabka lagu farsameeyo qaybo badan ama si isdaba joog ah? Intee in le'eg ayey tahay inay mashiinka qalajinta bacriminta wax ka qaban saacadiiba? Mudo intee le'eg ayay qaadataa si loo helo badeecad tayo sare leh oo dhammaad ah? Sidee ayuu habka wax soo saarku usameeyaa kahor iyo kadib qalajinta doorashadaqalajiyaha bacriminta?
Shuruudaha tayada ee alaabooyinka la dhammeeyey: Maaddadu ma yarayn doontaa, hoos u dhigi doontaa, qallajin doontaa, ama ku sumoobi doontaa inta lagu jiro qalajinta? Sidee labiskiisu u ahaanayaa qoyadiisa ugu dambeysa? Muxuu noqonayaa heerkulka iyo mugga cufnaanta sheyga ugu dambeeya? Maaddada la qalajiyey miyay soo saaraan boodh ama waxay u baahan yihiin soo kabasho labaad?
Xaaladda dhabta ah ee deegaanka ee warshadda: Meeqo wax soo saar ah ayaa loo heli karaa habka qalajinta ee warshadda? Waa maxay heerkulka, huurka iyo nadaafadda warshadda? Waa maxay warshadda lagu qalabeeyay ilaha awoodda saxda ah, dekedda gaaska qiiqa? Marka loo eego qawaaniinta deegaanka ee maxalliga ah, waa maxay xaddiga buuqa, gariirka, boodhka iyo tamarta kuleylka luminta ee loo oggol yahay geedka?
Adoo tixgelinaya arrimahan, qaarkood mashiinada qalajinta bacriminta ee aan ku habboonayn wax soo saarkaaga dhabta ah waa la tirtirayaa. Tusaale ahaan, sifooyinka jireed ama farsamaynta ee alaabta ceeriin ayaa qaar ka reebi doonta mashiinada qalajinta bacriminta, Noocyada uumiga ah ee mashiinnada lagu qalajiyo bacriminta durbaanka nooca uumiga ah ee qoyaanka badan, waxyaalaha waaweyn ee ceyriinka ah sida mica ma ahan xulasho wanaagsan. Ku Mashiinka qalajinta bacriminta durbaanka Rotary daabulaya alaabta inta lagu qalajinayo rogista iyo rogista, laakiin gaarsiintaan aan tooska aheyn si habsami leh ugama qaadin alaabada viso gaalka meesha, maaddaama maaddada viska ay ku dhegan tahay darbiga durbaanka iyo tuubada uumiga, ama xitaa xinjirooyinka. Xaaladdan oo kale, gaadiidleyda wareegga ah ama mashiinnada qalajinta bacriminta multi-disc aan tooska ahayn ayaa ah xulasho wanaagsan, gaarsiintaan fir-fircoon, waxay si dhaqso leh ugu wareejin kartaa mica dekedda quudinta illaa dekedda laga sii daayo.
Next tixgeli a mashiinka qalajinta bacriminta kaas oo buuxinaya raadadkaaga dhabta ah iyo meesha wax soo saar. Ka reeb mashiinada qalajinta bacriminta oo aan ku habooneyn xaaladaha wax soo saar ee jira ama u baahan dayactir qaali ah ama kordhinta kharashyada. Sidoo kale tixgeli miisaaniyadda raasumaalka iyo kharashyada hawlgalka iyo arrimo kale.
Haddii aad dooratid mashiinka qalajinta bacriminta ee waxqabadka sare si aad u hagaajiso habkaaga qalajinta ee jira, waa inaad tixgelisaa haddii qalabka kale ee jira, sida conveyors, feeders, mashiinka daahan, mashiinada baakadaha, bakhaarada, iyo qalabka kale, waxay u dhigmi karaan soosaarka kordhay ee mashiinada qalajinta bacriminta cusub.
Maaddaama kala-duwanaanta xulashooyinka mashiinka lagu qalajiyo bacrimintu ay u yaraanayaan, adeegso qalabka jira iyo bey'adaha wax soo saarka ee hadda jira si aad dhab ahaan u tijaabiso in mashiinka qalajinta bacriminta uu runtii ku habboon yahay iyo in kale.
Xaaladaha qalajinta ugufiican ee agabyada jira.
Effect Saamaynta mashiinka qallajinta bacriminta ee ku saabsan sifooyinka jirka ee alaabta ceeriin.
Haddii tayada iyo astaamaha walxaha la qalajiyey ay buuxinayaan shuruudaha.
● In awoodda mashiinka lagu qalajiyo bacrimintu ay habboon tahay iyo in kale.
Iyada oo ku saleysan natiijooyinka baaritaankaan, soo saaraha mashiinka qalajinta bacriminta sidoo kale waxay ku siin karaan talooyin faahfaahsan si ay si buuxda u buuxiyaan baahiyahaaga qalajinta. Dabcan, rakibaadda iyo kharashka hawlgalka ee mashiinka qalajinta bacriminta iyo shuruudaha dayactirka xiga ee mashiinka qalajinta bacriminta waa in aan la iska indhatirin.
Adoo tixgelinaya dhammaan faahfaahinta kor ku xusan, runtii waad iibsan kartaa mashiinka qalajinta bacriminta ugu haboon.